Ihe njikwa faili efu maka gam akporo: 5 nke kacha mma | Gam akporosis
Top 5 free faili manager maka gam akporo
Jose-Manuel Anguita | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Maka ụfọdụ ndị ọrụ gam akporo, ịnweta ịnweta nchekwa nke ngwaọrụ ha adịghị mkpa, ọbụlagodi ụjọ. Maka profaịlụ onye ọrụ ọzọ, ọ bụghị naanị dị mkpa, mana ịnwe nchekwa nke ihe niile na-eme ma nweta ya, bụ otu n'ime uru kasịnụ vesos mpi na mobile sistemụ.
Ka o sina dị, mee elu mee ala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile nwere mkpa de jikwaa faịlụ ọ bụla na anyị echekwala na ngwaọrụ anyị, ma ọ bụ ọbụlagodi na netwọkụ mpaghara anyị ma ọ bụ na igwe ojii. Anyị na-atụ aro ụfọdụ n'ime ndị njikwa faịlụ a ka ha mee ya.
N'ime obere edemede a anyị ga-anwa ịhọrọ ndị nke anyị chere bụ 5 nke ihe njikwa faili kacha mma na anyị nwere ike ịchọta na Google Play maka ngwaọrụ gam akporo anyị. Ha niile na mbipute n'efu.
N'ezie, ngwa ndị a niile ga-ekwe ka arụmọrụ ndị bụ isi a na-atụ anya na mmemme na njirimara ndị a, dị ka ịdegharị, ịkwaga, ihichapụ, ịmegharị aha na arụmọrụ faịlụ ndị ọzọ. N’isiokwu ahụ, anyị ga-elekwasị anya n’ihe ngwa ọ bụla nwere ike ime nke ọma ma ọ bụ n’ụzọ pụrụ iche karịa ndị ọzọ.
Nke ikpeazu ọ bụ a bit pụrụ iche dị ka ọ ga-ekwe ka management nke faịlụ site na nkasi obi nke anyị na desktọọpụ kọmputa site na WiFi, site na ihe nchọgharị.
1 Onye nyocha ES
3 Faịlụ ọkachamara
4 OI Njikwa faili
Onye nyocha ES
Anyị ga-amalite na njikwa na ọtụtụ bụ nke kacha mma dị na Google Play. Ọ na-adịbeghị anya emelitere ya na a interface emezigharị kpamkpam ma ewezuga njikwa njikwa nke nghọta nke faịlụ dị n'ime ngwaọrụ ahụ, ọ na-enye ohere njikọ na nnukwu isi mmalite dị iche iche dịka sava FTP, Samba, WebDAV, yana nchekwa igwe ojii: DropBox, Google Drive, wdg.
N'otu aka ahụ, ọ gụnyere nwere ndị na-ekiri ụdị niile: Oyiyi, ederede, vidiyo, ma bulie ya niile, ọbụlagodi nyocha faịlụ na ngwaọrụ ojiji. Ihe a niile na nkwado maka arụmọrụ mgbọrọgwụ na nyocha Bluetooth, mejupụtara nke nwere ike bụrụ ihe zuru oke.
Onye ọzọ nke ndị agha ochie (Mụ onwe m ejirila ya na HTC Magic, gam akporo izizi rutere Spain), bụ ASTRO. Dị ka nke dị n'elu zuru oke, gụnyere ịnweta netwọk mpaghara, faịlụ ndị dị n'ígwé ojii, faịlụ abịakọrọ, njikwa ọrụ, wdg.
N'etiti ha abụọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uto, ọ bụ ezie na enwere nkọwa na nke a na-eme ka ọtụtụ nọrọ na nke mbụ: versiondị nweere onwe ya zuru oke, mana mmgbasa ozi anyị, na iji kpochapụ ya ị ga-akwụ ụgwọ euro 3,99.
Njikwa faili ASTRO
Onye ọzọ n'etiti ochie n'etiti ndị njikwa faili bụ ọkachamara ọkachamara. Ọ na-apụta mgbe niile maka ya nụchara anụcha ma kpachara anya interface ọ na-adabara nke ọma na mbadamba, nke ọ bụghị ikpe na ihe niile.
Na mgbakwunye na isi, ọ na-enye ohere njikwa faịlụ dịpụrụ adịpụ site na FTP, HTTP, samba, FTP echekwara, wdg. Ọ ga-enye anyị ohere nke ijikwa ngwa, ọ ga-egosi thumbnails nke foto na vidiyo na ọ nwekwara ike na-egosipụta ederede na ihe oyiyi na ha onwe ha na-ekiri. Na mgbakwunye, ọ bụ njikwa ezi ìhè yana nkwado maka nnweta mgbọrọgwụ.
OI Njikwa faili
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike jupụta n'ọtụtụ nhọrọ na ohere, yabụ a onye njikwa dị mfe ma dị nkenke karị ọ nwere ike ịmasị ha ọzọ.
Dịka ezigbo ihe atụ nke ndị a, anyị nwere OI Njikwa faili. Onweghi ihe dị mkpa agbaghara, omume ọma ya bụ ịdị mfe na ịdị mfe.
Dị ka anyị kwurula, anyị ahapụla a mmemme a pụrụ iche n'etiti ndị njikwa faịlụ. N'okwu a, ọ bụ ngwanrọ arụnyere na ngwụcha gam akporo yana mgbe ịmalite ya ma debe paswọọdụ, ọ ga-agwa anyị URL na anyị ga-abanye na ihe nchọgharị ọ bụla nke ejikọrọ na otu netwọk ahụ iji nweta ya .
Si na desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ anyị, anyị na-enweta URL ahụ kwuru site na ihe nchọgharị ahụ ekwuru Site na paswọọdụ enyere, anyị enweghị ike ijikwa faịlụ na ngwaọrụ ahụ, mana jikwaa ngwa, kọntaktị, ozi, foto na vidiyo, wdg.
AirDroid: nnweta na faịlụ
Ozi ndị ọzọ - Etu esi wụnye ngwa ndi adighi na ngwa anyi, Etu esi wụnye ngwa na gam akporo (II): Nbudata na ntanetị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Top 5 free faili manager maka gam akporo
Xrnx Sxe dijo
Ezigbo mma post m na-eji ikuku gam akporo na-enweghị mgbagha dị oke mma mana ọzọ echefuru m ịkpọtụrụ aha na post bụ ọchịagha faịlụ.
Zaghachi Xrnx Sxe
Na nsọpụrụ niile, ọ bụrụ na ị kwuo na onye nyocha faịlụ kachasị mma maka gam akporo bụ Esfile Explorer, mgbe ahụ ị maghị Solid Explorer. Jiri obi ekele
Bing richard dijo
AirMore kacha mma
Zaghachi Bing Richard
Ubuntu Lockscreen, ezigbo Ubuntu Touch akpọghe ngwa maka gam akporo gị